Return to Nijeriya
Caawinaadaa waxaa barbar socdo garabgalka ka yimaada nidaamka-REAN Garabgalka Noqdayaasha iyo Muhaajiriinta ee Nederland (Return and Emigration Assistance from the Netherlands). IOM waa hey’adda oo nidaamkaasi amarka dowladda ku fuliso. REAN waxaad ka heleysaa talo bixin, tiked dullimaad, cawinaad sida aad dokumenti lagu safro u heli lahayd, iyo lacag jeebka oo daruuriyaadka ugu horreya ku maareeyso. IOM waxa ay kaloo ku siineysaa cawinaad dhab ah inta aad safarka dib u noqosho ku jirto. VluchtelingenWerk xitaa ama hey’ado kale oo kuugu caawini kara dib u noqoshaada ayaa kuugu caawini karo in garabgalkaasi aad IOM ka codsato. Waa in balse aad ku soo baxdo dhowr shuruud (voorwaarden ).
Kabista siismada ah ee dib u noqosho ee Nijeriya waa kuwan:
Idia Renaissance. VluchtelingenWerk waxa ay Nijeriya wada shaqeyn la leeyihiin Dib u Dhalashada Idia (Idia Renaissance). Hey’adaasi waxa ay hagaan reer Nijeriya oo dib u soo noqday (shaqsi iyo qooysba) si ay nolol cusub u bilaabaan. Iyaga ayaa dadka dib u soo noqday ku qaabilaaya degada diyaaradaha, ku caawinaaya baadi goobka hooy (ku meel gaar ah) waxa ayna ku garabgalayaan sidii ay u sameyn lahayeen shirkad yar ama ay shaqo u heli lahaayeen. Waxa ay kaloo kaa caawini karaan helista xirfad- ama wax-barashada, shax xiriiro oo wax gal ah, waxa ayna dadka u baahn u gudbin karaan hey’adaha caafimaadka. VluchtelingenWerk waxa ay la xiriireysaa ilaa sannad dib u noqoshada keddib hey’adda lammaanaha la ah si ay ula socdaan sida xaladdaada ay noqotay.
Haddii aad garabgalka IOM xulatay, waxaa ku caawinaaya shaqaalaha Xafiiska-IOM ee Nijeriya sida aad u bixineyso lacagta-dabiicga ah. Taasi inta ay tahay waxaad u adeegsan kartaa tusaale ahaan kiro, barasho xirfad, tababar, iibka shirkad iwlm.